Namaste Dainik – Page 2
September 17, 2020 September 17, 2020 NamastedainikLeaveaComment on बिलिङ प्रणालीमा आएको समस्याले टेलिकमका हजारौं ग्राहकको ब्यालेन्स काटियो ! फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा छौं ।
फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा छौं : प्रबन्ध निर्देशक काठमाडौँ — नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा शनिबार बिहान समस्या देखिएपछि हजारौं ग्राहक प्रभावित बनेका छन् । शनिबार बिहान केही समय डेटा खरिदको बिलिङ प्रणालीमा समस्या देखिएको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले बताए । ‘केही मिनेट बिलिङ प्रणालीमा समस्या आएपछि डेटा सब्स्क्राइब गरेको भए पनि मेन ब्यालेन्सबाटै भुक्तानी जाने […]
September 16, 2020 NamastedainikLeaveaComment on भोलिबाट लाइसेन्स वितरण हुने
काठमाडौं । सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण भोलिबाट (असोज १) हुने भएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र, ठुलो भर्याङले सूचना निकालेर लाइसेन्स वितरण थाल्ने जानकारी गराएको छ । लाइसेन्स प्रिन्ट भए नभएको एकिन गरेर लिन आउन भनेको छ। लाइसेन्स वितरण बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मात्रै हुनेछ । यातायात व्यवस्था विभागले […]
September 16, 2020 NamastedainikLeaveaComment on बिहान गएको भूकम्पले कुनै मा’नबिय क्ष’ति हुन पाएन !
सिन्धुपाल्चोक – बुधबार बिहान गएको भूकम्पले सिन्धुपाल्चोकमा कुनै क्ष’ति भएको खबर नआएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।सिन्धुपाल्चोकको राम्चे केन्द्रविन्दु भएर आज बिहान ५ बजेर १९ मिनेटमा गएको भूकम्पले भौतिक तथा मा’नवीय क्ष’ति नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ । तर, स्थानीयलाई सतर्कता अ’पनाउन स्थानीय प्रशासन र स्थानीय पालिकाले अ’पिल गरेको छ ।भूकम्पको धक्काले राम्चे […]
अमेरिकाले चिनियाँ सामग्रीमा सन् २०१८ मा भन्सार शुल्क बढाएपछि अमेरिका र चीनबीच व्यापार युद्ध नै सुरु भएको थियो । उक्त व्यापार युद्ध हालसम्म पनि साम्य हुन सकेको छैन। यसबीचमा विश्व व्यापार संगठन डब्लूटीओले अमेरिकाले त्यसबेला चीनसँग गरेको व्यवहार डब्लूटीओको नियमसँग नमिल्ने किसिमको भएको बताएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीति र नियमविरुद्ध गएर अमेरिकाले सन् २०१८ […]
September 16, 2020 September 16, 2020 NamastedainikLeaveaComment on अरिङ्गाल पोल्न रुख चढ्दा लडेर मृत्यु !
३१ भदौ, धादिङ । धादिङमा अरिङ्गाल पोल्न जाँदा रुखको हाँगा भाँचिएर लड्दा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने एकजना घाइते भएका छन् । त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं ४ मा अरिङ्गाल पोल्न जाँदा रुखको हाँगा भाँचिएर लड्दा एकजनाको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा ३५ वर्षीय अर्जुनबहादुर थापामगर रहेका छन् भने घाइते हुनेमा २४ वर्षीय राजवीर गुरुङ […]
भोलिबाट लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात चल्ने भएको छ। यातायात व्यवसायीले बिहीबारबाट लामो दूरीको यातायात सञ्चालनको लागि तयारी भइसकेको बताएका छन् । सरकारले भदौ ३१ सम्म लामो दूरीको यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज १ देखि लामो दूरीको यातायात सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। ‘हामीले असोज १ देखि लामो दूरीका […]